အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အစားအစာက သင့်အတွက် မှန်ကန်သလဲ? - Lifestyle Myanmar
အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အစားအစာက သင့်အတွက် မှန်ကန်သလဲ?
အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်းမာစွာနေနိုင်စေဖို့ နေ့စဉ်အစားအစာထဲမှာ ထည့်သင့်တဲ့ အစားအစာများနဲ့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအစာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့မှာ အသက်အရွယ်အုပ်စုအမျိုးမျိုးကို လိုက်ပြီး စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို ခွဲခြားပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကြီးထွားလာပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာဟာရတွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ လူအများအစုက နံနက်စာစားဖို့ ပျက်ကွက်ပြီး junk food တွေ စတင်စားသုံးမိကြတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုမှာ ပါဝင်နေရင် နေ့တိုင်း နံနက်စာစားတဲ့ အလေ့အထကို ပြုလုပ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သရေစာတွေကို မလိုအပ်သော်လည်း အရေအတွက်ကို လျှော့ချဖို့ စဉ်းစားပါ။ သင်စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ကယ်လစီယမ်၊ ပရိုတိန်းနှင့် သံဓါတ်ပါဝင်သော အစားအစာများ ပါဝင်ပါတယ်။
၂။ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ
အသက် ၂၀ကျော်သွားတဲ့အခါ junk food တွေကို ကျန်းမာအောင်လုပ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ အာလူးကြော်နေရာမှာ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် (သို့) ကန်စွန်းဥ၊ နို့ချောကလက်နေရာမှာ ချောကလည်းအမည်း၊ ရေခဲမုန့်နေရာမှာ ဒိန်ချဉ်နှင့် ကြက်ကင်တို့ကို စားသုံးပေးပါ။ သင့်အစားအစာထဲမှာ အစိမ်းရောင်အရွက်များ၊ ပေါင်မုန့်၊ ပါစတာ၊ ဆယ်မွန်၊ ချီယာစေ့ ကဲ့သို့သော ဖောလစ်အက်ဆစ်နှင့် အိုမီဂါ ၃အဆီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ ထည့်ပါ။
၃။ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ
ဒီအသက်အရွယ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမှုတွေကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ သင့်အစားအသောက်ထဲမှာ အရိုးတွေသန်မာပြီး ကြွက်သားတွေတည်ဆောက်ပေးတဲ့ အစားအစာများကို ထည့်စားပါ။ ကြက်ဥ၊ အစေ့အဆန်၊ အခွံမာသီး၊ ပဲပုပ်၊ ကြက်ရင်ပုံကဲ့သို့သော ပရိုတိန်းကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများူက သင့်မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ။နွားနို့နှင့် ဒိန်ချဉ်ဟာ အရိုးအားဖြည့် ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် ဖြစ်ပေမယ့် လိုအပ်လျှင် ကယ်လစီယမ်နှင့် ပရိုတင်းဓါတ် ဖြည့်စွက်စာ သောက်သုံးဖို့ စဉ်းစားပါ။
၄။ အသက် ၄၀ အရွယ်မှာ
သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပမာဏကို ထိန်းညှိဖို့နှင့် ဇီဝကမ္မကို မြှင့်တင်ဖို့ ဒီအဆင့်မှာ အမျှင်ဓါတ်စားဖို့ သေချာပါစေ။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ whole grains နှင့် အာလူးတွေက အမျှင်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Junk food တွေကို ရှောင်ရှားသင့်သော်လည်း အသီးအရွက်ဘာဂါစားပေးနိုင်ပါတယ်။ အသီးအရွက်တွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေကြွယ်ဝပြီး ကျန်းမာပါတယ်။ မှာပြီးစားမယ့်အစား ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ဘာဂါလုပ်စားကြည့်ပါ။ သင်စားသုံးနိုင်တဲ့ အခြားအစားအစာတွေကတော့ အိမ်မှာလုပ်တဲ့ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ အဆီမပါတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ သစ်သီးနှင့် အသီးအရွက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်တိုင်းမှာ ပရိုတိန်းဓါတ်ပါဝင်ရပါမယ်။
၅။ အသက် ၅၀ အရွယ်မှာ
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းက လျော့နည်းလာတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွယ်တကူ အစာကြေနိုင်တဲ့ အစားအစာများ စားသုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အသက် ၅၀ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ သကြားမပါတဲ့ နို့တွေကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သကြားအစား ပျားရည်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကို လျှော့ချဖို့ ထောပတ်သီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ အခွံမာသီးနှင့် ဟင်းနုနွယ်တို့ကို စားပါ။ ပန်းသီးစားခြင်းက ကိုလက်စထရောကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဆီးချိုရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
၆။ အသက် ၆၀ကျော်လာရင်
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ရောက်နေရင် နေ့စဉ်အစားအစာထဲမှာ အသီး ၂ပုံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၅ပုံ ပါဝင်ဖို့ သေချာပါစေ။ ဟင်းနုနွယ်၊ ပဲနီလေး၊ ပဲတောင့်ရှည် ကဲ့သို့သော သံဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို စားသုံးပါ။ ပဲပုပ်ပဲနှင့် အစိမ်းရောင်အရွက်များက သင့်ကို ကျန်းမာစွာ နေနိုင်ဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းအပြင် ဆားစားသုံးမှုကို လျော့ချပါ။ မဝယ်မီ ပစ္စည်းတွေကို ဆားထည့်/မထည့် စစ်ဆေးပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ junk food နှင့် ချိုတဲ့ အစားအစာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပါ။
Shea butter, aloe vera, jojoba oil, hyaluronic acid တို့ဟာ ခြောက်သွေ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေ နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ skincare ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က အသားပတ်တာကို သက်သာစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းစေပါတယ်။ အစိုဓါတ်နည်းတဲ့...
နဖူးပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေဟာ အသက်အရွယ်အရ၊ မျိုးရိုးဗီဇအရ၊ နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုအရ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ နဖူးက အရေးအကြောင်းတွေကို လုံးဝဖယ်ရှားလို့မရပေမယ့်လည်း အချို့သော သဘာဝကုစားမှုတွေက မြင်သာမှုနည်းအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအချက်က အရေပြားရဲ့အစိုဓါတ်နဲ့ elasticityကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ နည်းစနစ်တွေကို အာရုံစိုက်ဖို့...
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် အသက်ပိုရှည်ကြတာ လျှို့ဝှက်ချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက အမျိုသမီးတွေအတွက် good new ဖြစ်ပုံရပေမယ့် သူတို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် မြန်မြန်အရွယ်ကျကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါက အံ့အားသင့်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။...